Banijya News | » सेयर बजारमा लगाम लगाउने राष्ट्र बैंक नीति, के अव सेयर बजारमा करेक्सन आउँला ? सेयर बजारमा लगाम लगाउने राष्ट्र बैंक नीति, के अव सेयर बजारमा करेक्सन आउँला ? – Banijya News
सेयर बजारमा लगाम लगाउने राष्ट्र बैंक नीति, के अव सेयर बजारमा करेक्सन आउँला ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा दिइने कर्जामा कडाइ गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर बजारलाई लगाम लगाउने संकेत गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सेयरको धितोमा मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म पु¥याएको थियो । सो प्राबधान राष्ट्र बैंकले केही परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
यस्तै, धितोपत्रको दोस्रो बजार बढ्दो अवस्थामा रहेको र जोखिम पनि बढ्दै जाँदा सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्न खोजिएको हो ।
गत साउन २ गते मौद्रिक नीति ल्याउँदा सेयर धितो कर्जामा केही लचकता अपनाएको केन्द्रीय बैंकले त्रैमासिक समीक्षामा नै कडाइ गर्ने तयारी गरेपछि त्यस्को असर सेयर बजारमा देखिने छ । केन्द्रीय बैक मात्र होइन शुक्रबार ब्रोकर कमिसन कटाउनुपर्ने मागसहित धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्न पुगेका लगानीकर्ताले चारमहिनामानै सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने साउनमा नेप्से परिसूचक ११०० हुँदा आएको नीति अहिले करिब २१०० नजिक पुग्दा जोखिम पनि बढेकोले सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न खोजिएको बताउँछन् ।
‘बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा बैंकहरुले लगानीको अवसर खोज्दै जाँदा जोखिम आउनेगरी लगानी नजाओस् भन्ने नै राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजार परिसूचक बढ्दै जाँदा मार्केटमा बबल ब्रस्ट हुन्छ त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हो ।’ बजारको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्नुपर्ने र सोही कारणले नै मौद्रिक नीतिलाई डाइनामिक भनिएको अर्का एक अधिकारीको भनाइ छ ।
के छ यो साताको कारोवार अवस्था ?
धितोपत्र दोस्रो बजारमा यो साताको पाँच कारोबार दिनले परिसूचक १६२ दशमलव २१ विन्दु माथि पु¥याएको छ । यो साता पनि बजारमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागीता देखिन्छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन मंसिर ११ गते १ हजार ८९३ दशमलव २४ विन्दुमा रहेको बजार यो साताको अन्तिम कारोबार दिन मंसिर १८ गते २ हजार ५५ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ ।
चार कारोबार दिन निरन्तर उकालो लागेको बजार अन्तिम कारोबार दिन भने करेक्सन भएको छ । पहिलो कारोबार दिन ७५ दशमल शून्य २, दोस्रो दिन २८ दशमलव ७९, तेस्रो दिन ३ दशमलव ३५ र चौथो दिन ७० दशमलव ६२ अंकले बढेको बजार पाँचौ दिन भने १५ दशमलव ५७ अंकले घटेको हो ।
यो साता रू. ४० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख २३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकमले पनि बजारलाई गति लिन साथ दिएको देखिन्छ । गत साताको कारोबारको तुलनामा यो साता रू. ९ अर्ब ४४ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । गत साता रू. ३१ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ८८ हजार बराबरको कारोबार भएको थियो ।
कारोबार रकमसँगै शेयर कारोबार कित्ता पनि बढी रहेको छ । यो साता १० करोड ११ लाख ६७ हजार ३९४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । गत साता ७ करोड ५८ लाख ३८ हजार ८६४ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
यो साता ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २७ दशमलव ११ अंक माथि उक्लिएको छ । ३६५ दशमलव १८ विन्दुदेखि सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३९२ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको हो । शेयर कित्ताको कारोबारलाई हेर्दा ठूला कम्पनीकोसँगै साना कम्पनीको शेयर कारोबारमा लगानीकर्ताहरुको सहभागीता देखिन्छ ।
सातामा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य रू. २ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड १० लाखले वृद्धि भएको छ । गत साताको अन्तिम दिन रू. २५ खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रहेको कुल बजार पूँजीकरण रकम यो साता रू. २७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड ३० लाख पुगेको हो ।